नेपाल लाइभ | २०७६ जेठ ७ मंगलबार | Tuesday, May 21, 2019 २०:३६:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं- सुर्खेतका चन्द्रप्रसाद आचार्य हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले ३ जनालाई पक्राउ गरेको छ।
पक्राउ पर्नेमा वीरेन्द्रनगर-६ बुद्धपथमा होटेल सञ्चालन गर्दै आएका नन्दकला विष्ट, उनका श्रीमान् कृष्ण विष्ट र छोरी बिन्दु विष्ट रहेको कर्णाली प्रदेशका डिआइजी महेशविक्रम शाहले बताए।
हत्या भएका आचार्यले पनि होटल संचालन गर्दै आएका थिए। उनको गत फागुन १८ गते हत्या भएको थियो।
हत्या भएको दिन नन्दकला विष्टले संचालन गरेको पसल वरपर केही मानिस धेरै पटक आवात-जावत गरेको सिसिटिभिमा देखिएको थियो।
टहरोको आँखी झ्यालजस्तो भागबाट पटकपटक चियाएर भित्रबाहिर गरेको समेत देखिएको डिआइजी शाहले बताए। ९ बजेर ३७ मिनेटमा अन्तिम पटक पसलमा प्रवेश गरेको सिसिटिभिमा आचार्य देखिएका थिए।
तर प्रहरीले सो अनुसन्धान गर्न लामो समय लगाएको भन्दै परिवारले असन्तुष्टि राख्दै आएको थियो।
हत्याको कारन भने खुलिनसकेको प्रहरिले जनाएको छ।
फागुन १८ शनिबार। बिदाको दिन। भेटघाट गर्ने भन्दै चन्द्रप्रसाद आचार्य श्रीमतीसँगै ससुराली गए। ससुराली पुगेका चन्द्रप्रसादलाई सन्चो भएन। उनी श्रीमती हरिकला आचार्यसहित घर फर्किए।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरको जुम्ला रोडमा आफ्नै चियानास्ता पसलमा आइपुगेपछि चन्द्रसादले श्रीमतीलाई घर पठाए। भोलि बिहानलाई तरकारी लिएर आउने बताएपछि चन्द्रप्रसादकी श्रीमती हरिकला एक्लै घरतर्फ लागिन्।
चन्द्रप्रसादले पसल खोले। तरकारी लिएर घर आउने बताएका चन्द्रप्रसाद राति अबेरसम्म पनि घर फर्किएनन्। श्रीमानकै पर्खाइमा बसेकी चन्द्रप्रसादकी श्रीमती त्यतिबेला अर्धचेत अवस्थामा पुगिसकेकी थिइन्, जतिबेला चन्द्रप्रसादको शव घरमै आइपुगेको थियो।
श्रीमानको पखाइमा बसेकी हरिकलाले २४ घन्टापछि अर्थात् भोलिपल्ट फागुन १९ गते साँझ ५ बजे श्रीमानको शव आफ्नै घरको आँगनमै देखिन्। त्यसबेला केही प्रहरी र आफन्तले चन्द्रप्रसादको शव उनको घर पुर्‍याएका थिए।
चन्द्रप्रसाद आचार्य अर्थात् चियानास्ता पसले। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर-१ का ४५ वर्षीय व्यापारी चन्द्रप्रसाद अर्यालको हत्या भएको आज (मंगलबार) ६६ दिन पुगेको छ। उनको गत फागुन १८ गते हत्या भएको थियो।
वीरेन्द्रनगर-६ जुम्ला रोडमा चन्द्रप्रसादले चियानास्ता पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए। उनका एक छोरी र छोरा काठमाडौं बसेर पढ्छन्। चन्द्रप्रसाद र उनकी श्रीमती भने सुर्खेतमै चियानास्ता पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए।
सरकारी कार्यालय नजिक उनको पसल थियो। हत्या भएको दिन उनलाई ८ बजे पसल वरपर देख्नेमान्छे पनि छन्। उनको हत्या भएको ठाउँ नजिकै रहेको एउटा डेरी पसल र अस्पतालको सीसी टीभी फुटेजमा राति ८ बजेर ४६ मिनेट जाँदा चन्द्रप्रसाद कैद भएका छन्। त्यसपछिको १ घन्टा १४ मिनेटभित्र अर्थात् १० बजेर ३ मिनेटमा उनको हत्या भएको थियो। अहिले त्यही १ घन्टा १४ मिनेट अवधिको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निकै कठिन भएको छ।
त्यो बीचमा उनी कहाँ गए? को-को आए? कसले हत्या गर्‍यो? किन गर्‍यो? जस्ता अनेकौं प्रश्नको उत्तर त्यही १ घन्टा १४ मिनेटभित्र मात्र फेला पर्न सक्छ। तर प्रहरीलाई यति छोटो समयको अनुसन्धान गर्न समेत निकै गाह्रो परेको अवस्था छ।
फागुन १८ गते राति १० बजेर ३ मिनेटमा चन्द्रप्रसादको शव प्रहरीले अथिति होटल नजिकै बीच बाटोमा फेला पारेको थियो। उक्त सडक बजारको शाखा रोड हो। जहाँ दिउँसो मान्छे र गाडीको राम्रै ओहोरदोहोर हुन्छ। त्यहाँको भित्ता र कपडामा समेत रगतको टाटा लागेको थियो।
चन्द्रप्रसादको शव भेटिएपछि प्रहरीले तत्कालै उनको शव पोष्टमार्टमको लागि सुर्खेतकै प्रदेश अस्पताल कालागाउँ पठाएको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टअनुसार उनको छातिको एक भागको तीन वटा र अर्को भागको चार वटा गरी ७ वटा करङ भाँचिएको थियो।
मुटु फुटेर इन्टर्नल ब्लडिङ भएकाले मृत्यु भएको जनाइएको छ। त्यस्तै गर्धनको हड्डी र एक वटा हात भाँचिएको थियो। बाहिर शरीरभर नीलडाम, टाउकाको पछाडि पट्टी दुई वटा गहिरो चोट छ। निकै दर्दनाक देखिन्थ्यो चन्द्रप्रसादको शव।
पोस्टमार्टमा चन्द्रप्रसादका आफन्तको उपस्थिति थियो। पोस्टमार्टम सकिएपछि फागुन १९ गते दिउँसो ५ बजे शव घर लगिएको चन्द्रप्रसादकी छोरी संगिताले बताएकी थिइन्।